HARGEYSA OO LAGU KALA XADO BAABUURTA IYO DHACDOOYINKII UGU YAABKA BADNAA | Saxil News Network
HARGEYSA OO LAGU KALA XADO BAABUURTA IYO DHACDOOYINKII UGU YAABKA BADNAA
Hargeisa (Saxilnews)-Waxa beryahan dambe ku soo soo badanayay Magaaladda Hargeysa tuug xadaysa Baabuurta yaalla meelaha baarkinadda ah (Parkings), kuwaasi oo ku furanaya fureyaal ay samaysteen oo noocyadda baabuurta oo dhan furaya oo la yidhaahdo (Master Key).
Guddoomiyaha Wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA Mr. Xuseen Aadan Yuusuf (Xuseen Kurdi) waxa laga xaday baabuur Grande ah oo uu gaar u leeyahay, waxaanu baabuurkaasi ka maqnaa muddo saddex habeen ah.
“Baabuurkaygii oo yaalla Idaacadda Horteeda oo aan wada xidhay daaqadihiisa, furihiina aan qaatay, ayaan habeenimadii Ciidu soo gelaysay markii aan xili dambe oo aan shaqadda ka baxay aan isku dayay inaan baxo ayaan waayay baabuurkii, ciidankii Booliska ayaan ku wargeliyay, waanu daydaynay ka dibna waanu ka quusanay,”Ayuu yidhi Xuseen Kurdi.
Waxa kale oo uu intaas ku daray in saddex habeen ka dib Boolisku ku soo wargeliyeen in baabuurkiisii meel cidla ah yaallo. “Markii Boolisku ii soo sheegeen waxaan ugu tagay meel idaacadda agteeda ah isagoo la iska dhigay oo taayir ka banjaray, ka dibna sidaasi ayuu gacantayda ugu soo noqday Gaadhigii aan maalmaha raadinayay.
“Gaadhiga Muraayadaha daaqadaha lama jabjabin, taasi ayaa kuu caddaynaysa in aan la jabinin ee furre lagu furtay. Arrintaasina waa dhacdooyin budhcadnimo oo ku cusub Somaliland. Waana wax u baahan in gaadiidlayda iyo bulshadduba ku baraarugto,”ayuu ku dooday Xuseen Aadan Yuusuf oo xalay u warramay Gudgudenews.
Geesta kalena weriyeyaal ka tirsan DAWAN, ayaa ku soo waramay inay la kulmeen illaa dhawr qof oo u sheegay in ay soo baxeen tuug xeelad sarre adeegsanaysa oo xada baabuurta, inta ay ku furtaan fureyaal baabuurta oo dhan furaya.